Moments Neshamwari 4
Pakusangana mamwe manheru apfuura mubvunzo wakabvunzwa: Ive Theosophist mune zvinomera kana kudya nyama here?
Iyo theosophist inogona kunge iri nyama inodya kana yemiriwo, asi yemusango kana nyama ichidya haigone kuita yeiyo inosophist. Nehurombo, vanhu vazhinji vakafungidzira kuti sine qua isiri yehupenyu hwomweya ndeyemutovo wekudyara, nepo chirevo chakadai chakapesana nedzidziso dzevarairidzi vechokwadi vemweya. "Kwete izvo zvinopinda mumuromo zvinosvibisa munhu, asi izvo zvinobuda mumuromo, izvi zvinosvibisa munhu," akadaro Jesu. (Mat.xvii.)
'Usatenda kuti ugere mumasango erima, mune kudada kwekuvanzika uye kunze kwevanhu; usatenda izvo kuti hupenyu pamidzi nepamera. . . .Kuzvipira, kuti izvi zvichakutungamira kunharidziro yekusunungurwa kwekupedzisira, "inodaro Voice of the Silence Muongorori wezvezwi anofanira kushandisa kutonga kwake kwakanaka uye agare achitungamirirwa nechikonzero mukuchengeta kwehutano hwepfungwa nepfungwa. Nezve nyaya yezvikafu mubvunzo wekutanga waanofanira kuzvibvunza ndewekuti "Chikafu chipi chinodiwa kuti muviri wangu ugare uine hutano?" Paanoona izvi nekuyedza ngaamutore chikafu icho chinomuwonesa nezvaanoona. kushandurwa zvakaringana nezvinodiwa zvake zvemuviri nepfungwa. Ipapo anenge asina chokwadi chekuti achadya chikafu chipi, asi zvirokwazvo haazotauri kana kufunga nezve nyama kana zvemakwenzi seanofanirwa neiyo theophofist.
Ko, theosophist chaiyo angazviona sei anosophist uye achiri kudya nyama kana tichiziva kuti zvinodiwa zvemhuka zvinodzingwa kubva panyama yemhuka kusvika mumuviri weanozvidya?
Wenosophist chaiye haambozviti ndiye theosophist. Kune nhengo dzakawanda dzeTheosophical Society asi vashoma kwazvo theosophists nekuti theosophist ndiye, sezita rinoreva, uyo asvika kuuchenjeri hwamwari; uyo akabatana naMwari wake. Kana tichitaura pamusoro peiyo chaiyoiyo theosophist, tinofanira kureva munhu anehungwaru huMwari. Kazhinji, kunyangwe isina kunyatsotaura, kutaura, zvakadaro, theosophist inhengo yeiyo Theosophical Society. Iye anoti anoziva zvishuwo zvemhuka kuendeswa kumuviri weiye anodya anozviratidza nezvaakataura kuti haazive. Nyama yemhuka ndiyo yakanyanya kukura uye yakasimbirira yehupenyu hupenyu inogona kuve inoshandiswa kazhinji sechikafu. Izvi zvinomiririra chishuwo, zvirokwazvo, asi chishuwo chemhuka chiri muchimiro chayo chisikwa chakashata pane chishuwo chiri mumunhu. Chishuvo pachako hachina kushata, asi chinongova chakaipa kana pfungwa dzakaipa dzakabatana nazvo. Haisi iyo kuchiva iyo pachayo yakaipa, asi zvakaipa zvakaipa kuti zvakaiswa neiko pfungwa uye kwainogona kupinza pfungwa, asi kutaura chishuwo chemhuka sechinhu chakaiswa kumuviri wemunhu chinhu chirevo chisina kunaka. Icho chinonzi ana rupa, kana chishuwo-muviri, chinosimbisa muviri wechikara, hachina kubatana nenyama yemhuka iyoyo mushure mekufa. Chido chemhuka chinogara muropa rechikara. Kana mhuka yaurawa, chishuwo-muviri unobuda kunze kwemuviri wenyama neropa rehupenyu, uchisiya nyama, yakagadzirwa nemasero, seyakaunganidzwa hupenyu hwehupenyu hwave hwakagadziriswa nemhuka iyoyo kubva kuumambo hwechibereko. Iye anodya nyama angave aine kodzero yakawanda yekutaura, uye ave anonzwisisa kana akadaro, kuti svinu iyi yaive ichizvipisa muchetura neredhiyo nekudya lettuce kana chero humwe hupfu hwakazara mumiriwo, kupfuura munhu wemuriwo anogona zvinyatso taura kuti nyama yaidya yaidya nekutora zvido zvemhuka.
Hazvisizvo here kuti yogis yeIndia, nevarume vezvinhu zvinopiwa naMwari, vanorarama pamiriwo, uye kana zvakadaro, havafaniri here avo vanozozvidzivirira pachavo voga kudya nyama uye vachirarama nemiriwo?
Ichokwadi, kuti mazhinji ma yogis haadye nyama, kana ivo vane vane ruzivo rwakakura rwemweya, uye vanowanzogara vasina varume, asi hazvitevedze izvo nekuti vakaita, vamwe vese vanofanira kurega nyama. Varume ava havawane zvekunamata nekuti vanogara pane miriwo, asi vanodya miriwo nekuti vanogona kuita pasina kusimba kwenyama. Zvakare tinofanira kuyeuka kuti avo vawana vakasiyana kwazvo nevari kuyedza kutanga, uye chikafu cheimwe hachive chikafu chemumwe nekuti muviri wega wega unoda chikafu chinodiwa kwazvo kuti uchengetedze hutano. Zvinonzwisa tsitsi sezvo zviri kusekerera kuona kuti iye zvino chinhu chakakosha chaonekwa iye anoona kuti anogona kunge achifungidzira kuti chaanogona kusvika. Isu takaita sevana vanoona chinhu chiri kure asi ivo nokusaziva vanosvika pakuchibata, vasingafungire kuti chinhambwe chinopindira. Zvakaipa kwazvo kuti vangadai vari vanoshuvira yoggi kana kuti humwari havafanirwe kutevedzera hunhu hwewamwari uye nzwisiso yemweya yevanamwari pachinzvimbo chekuisa tsika nehutsika zvakanyanya netsika, uye vachifunga kuti nekuita izvi, ivo vanozoitawo huMwari. . Chimwe chezvinhu zvakakosha kuti munhu afambire mberi pakunamata kudzidza izvo zvinonzi naCarlyle "Kukodzera Kwokusingaperi Kwezvinhu."
Kutya mimwe miriwo kunobatsira sei pamuviri wemunhu, zvichienzaniswa nekudya nyama?
Izvi zvinonyanya kutsanangurwa nezvigadzirwa zvemukati zvekushandisa. Kugaya kunoitwa mumuromo, mudumbu nepamuviri, zvichibatsirwa nokuvanzika kwechiropa uye pancreas. Matavi anodyirwa zvakanyanya mudumbu remvura, nepo mudumbu chiri chinowanzogaya nyama. Chikafu chinotorwa mumuromo imomo chakakomberedzwa uye chakasanganiswa nemate, meno achiratidza hunhu hwepanyama uye hunhu hwemuviri pakubata kwaro hunhu kana huronyo. Meno anoratidza kuti murume ane zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvinokora nyama uye chimwe chikamu chetatu chakabereka, zvinoreva kuti zvisikwa zvakamupa maviri kubva muzvitatu ehuwandu hwehuwandu hwemazino ake ekuti adye nyama uye chetatu chemiriwo. Mune yakasikwa ine hutano muviri ichi chinofanirwa kuve chikamu chechikafu chayo. Mune hutano hutano kushandiswa kwerimwe rudzi kusabvisirwa imwe kunozokonzeresa hutano. Iko chete kushandiswa kwemiriwo kunokonzeresa kugaya uye mbiriso kugadzirwa mumuviri, izvo zvinounza mune ese marudzi ezvirwere izvo munhu mugari wenhaka kwaari. Paakangotanga kuvirisa mudumbu uye matumbo ipapo pane mafomu mafomatiki muropa uye pfungwa dzinobva dzagadzikana. Iyo carbonic acid gasi inovandudzwa inokanganisa moyo, uye nekudaro inoshanda pamitsipa sekukonzera kurwisa kwekuoma kwemitezo kana kumwe kushushikana kwemhasuru nemasuru. Pakati pezviratidzo neufakazi hwezvemusango ndeyekusanzwisisika, moyo murefu, kushomoka kwemukati, kutenderera kwakasununguka, kudzora kwemoyo, kushaya kwekuenderera kwekufunga uye kusimbisa pfungwa, kuputsa kwehutano hwakasimba, kuwedzera simba remuviri, uye maitiro masvikiro. Kudya nyama kunopa muviri uye neakasikwa simba izvo zvinoda. Inoita yemuviri ive yakasimba, ine hutano, yenyama yemhuka, uye inovaka iyi mhuka yemuviri senhare kuseri iyo iyo pfungwa inogona kumira mukupikiswa kwehumwe humwe hunhu hunosangana nayo uye inofanirwa kukwikwidza mukati meguta rimwe nerimwe rakakura kana kuungana kwevanhu. .